ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် အလွမ်းပြေ ရိုက်ချက်များ အမှတ် (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် အလွမ်းပြေ ရိုက်ချက်များ အမှတ် (၂)
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် အလွမ်းပြေ ရိုက်ချက်များ အမှတ် (၂)
Posted by black chaw on Oct 15, 2011 in News, Photography | 19 comments
ဘလက်ချောရဲ့ အမှတ်တမဲ့ ရိုက်ချက်များ
ဒီပုံတွေကို တင်ရကျိုးနပ်သွားပါပြီ သူကြီးရေ။ ကျွန်တော်တို့ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ တက်နေတုန်းကတည်းက ရင်ခုန်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းကြီးပါ။ ကျွန်တော်တို့တောင် ကံတော်တော်ကောင်းလို့ မှီလိုက်တဲ့ ကျောင်းကြီး။ အခုခေတ် ကလေးတွေကို တက်စေချင်မိတယ်။ သူတို့လည်း ဒီနေရာလေးမှာ ကျောင်းတက်ချင်ကြမှာပဲလို့ ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။ လူတစ်စု အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ကလေးတွေ မြို့ပြင်က သင်းချိုင်းကုန်းတွေနားမှာ ကျောင်းတက်နေရတာ သဘာဝမကျပါဘူး။ ကျွန်တော့် တူမလေးတစ်ယောက်ဆို သန်လျင် က ဂျီတီစီကို မနက်အစောကြီးထပြီး သွားတက်နေရတာ ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတယ်။ စီးပွားရေးရောဘာထူးလဲဗျာ။ ရွာသာကြီး ကြက်မွေးမြူရေးခြံတွေနားကို သွားတက်နေရတယ်။ ဒါတွေကို အဆုံးသတ်သင့်ပါပြီ။ အာရ်စီတူးကို ကျွန်တော်ရောက်တော့ ၀င်ခွင့်မရဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒေသကောလိပ်ဘ၀တုန်းကတောင် ၀င်လို့ရခဲ့တဲ့ကျောင်းကြီးကို အခုအထက်တန်းကျောင်းက မူလတန်းကလေးတွေတက်တဲ့ ခေတ်ရောက်မှ ၀င်လို့မရခဲ့ဘူး။ အာရ်စီတူးမှာ တီတီစီ ဖွင့်တာ ဘယ်သူ့ စနက်လဲ။ ဒီမိုကရေစီကျကျ တောင်းဆိုချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေကို ပြန်ပေးပါလို့။
မနေ့က အလွမ်းမပြေသူများအတွက် ဒီနေ့ ထပ်ကြိုးစားပေးထားပါတယ်။
ကိုသစ်မင်း လွမ်းနေတဲ့ ဒဂုံဆောင်။
ဆရာဆွေ အလွမ်းပြေဘို့ နှင်းဆီဆောင် အ၀င်ဝ။
နှင်းဆီဆောင်ဘေးက အင်ကြင်းဘက်ထွက်တဲ့ လမ်းကြားလေး။
တီချယ်ကြီး TTNU နေခဲ့တဲ့ ဂန္ဓမာဆောင်။
တီချယ်ကြီး အလွမ်းပြေဘို့ ဂန္ဓမာဆောင် အတွင်းဘက်က ရသလောက်ရိုက်ချက်။
ဂန္ဓမာဆောင် ရှေ့က အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနေသော ကြက်ဆူ စိုက်ခင်း။
လွမ်းတတ်ရင် လွမ်းချင်စရာ၊ အာရ်စီတူးထဲက စာသင်ဆောင်တစ်ခု။ အခုတော့................
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ တစ်ချိန်တုန်းက ပျော်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ အာရ်စီတူး။
ကျောင်းဘယ်မှာပဲတက်တက် ဘွဲ့ယူပြီးရင်တော့ ဂျဒ်စင်ရှေ့မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြဆဲ။
တီချယ်ကြီး လွမ်းတယ်ဆိုတဲ့ လမ်းကလေး၊ manawphyulay တွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ချစ်သူလမ်းကြားလေး။
manawphyulay ပြောတဲ့ နာမည်ကြီး RC....
တီချယ်ကြီးတို့ ပင်ပေါင်လာရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ RC ထဲက အားကစားရုံ။
ဂျဒ်စင် နောက်ခံနဲ့ ချစ်သူတို့လျှောက်သောလမ်းကလေး။
ဆရာကိုသစ်မင်း အတွက် ပဲခူးဆောင် ပုံလေးပါ။
သထုံဆောင် ပုံလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုလင်းဝေကျော်ရေ။
တောအထာ၊ တောကဗျာ ထီးကိုးလက်။
ဆိုက်ကား တစ်စီးရပ်ထားပါတဲ့ ဂန္ဓမာဆောင်။
ရွှေဘိုဆောင် ဘက်နားက ဂျဒ်စင်နဲ့ ပြိုင်ပြီး မိုးထိုးနေတဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်။
အားလုံး အလွမ်းပြေ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
RC2ထဲက T12 တို့ T 13 အဆောင်တွေရယ်… နောက် ကျောင်းဆောင်တွေရဲ့အလယ်မှာ အပင်ထီးထီးကြီးရယ်…. ဒါလေးတွေကော ရိုက်လာဘူးလား။ သတိရပါတယ်။ RC2 မှာ တက်ခဲ့ရတဲ့ ဒုတိယနှစ်နဲ့ တတိယနှစ်ကို လွမ်းမိတယ်။ RC2 ထဲမှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတဲ့နေ့ရက်တွေကို ခုထိမမေ့သေးဘူး။
ဆရာမရေ။ RC2ထဲက ၀င်လို့ မရဘူးဗျ။ ရသလောက် အပြင်က ရိုက်ခဲ့ပေးတာပါ။
ဒီကျောင်းကြီးမှာ မတက်ဖူးပေမဲ့ ဒီဓါတ်ပုံတွေကြည့်၇တာ တစ်ခုခု ကို လွမ်းသလိုပဲ.. မတက်ခဲ့ ၇တာကိုပဲလွမ်းသလား မသိပါဘူး..။ ဒါနဲ စကားမစပ် ဓါတ်ပုံတွေကို နည်းနည်းလေး ပိုကြီးအောင်တင်ပေးပါလား။
ညီလေးရေ။ ပုံကြီးကြီးတင်ရင် ကြည့်ရတာပိုအားရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီဆိုက်တောင်မှ အချိန်တော်တော် ယူရပါတယ်။ အစ်ကိုပဲ ညံ့လို့လားမသိပါဘူး။
အခုတောင် မန်ယူပွဲနဲ့ တော်တော်ကပ်သွားပြီ။ နောက်တစ်ခါကြိုးစားပါ့မယ် ညီလေးရေ။
မေ~သရဖီ၊ ဟန်~နှင်းဆီ၊ အုန်း~ကန့်ကော်၊ ဇွဲ~ဂန္ဓမာ၊ နောက်တော့ ပေါင်း~မာလာ အကြောင်းပေါ့နော်။
ကြုံရင် အားရပါးရ ပြောကြမယ်ဗျာ။
ညည အင်ကြင်း၊ သဇင်၊ နှင်းဆီ၊ သရဖီ တွေမှာ သီချင်းတွေ ဆိုတဲ့အထဲက ကိုစိုင်းမောင်
မိန်းထဲ က ဇော်ဝမ်းတူး
နှင်းဆီ ကို မြင်တော့ သရဖီ ကို လွမ်းပြန်ရော၊ အဲဒီအဆောင် ၂ခု ကြား က စာတိုက်ကလေး။
ပန်းဝတ်ရည် စတိုး၊ ကန်သာယာ က ချစ်လူမိုက် ဦးစိုးလွင်၊ ဦးတင်အောင်ရဲ့ ရွှေကြယ်ကဖီး၊အနိုင်ကျင့်နေ
ကျ ကိုအောင်ဇော်ရဲ့ ဝက်အူမကြီးသုတ်၊ မာလာဝင်းကပဲထမင်း၊ ဟား
ကြားပြီးပြီလား ဟိုတယ်ဖွင့်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့ အထဲပါတယ်တဲ့ စီမံကိန်း /အော် တစ်ချိန်တုန်းက Natural Sciences University , တဲ့ ( အမေရိကန်က ပေးတုန်းက ) နောက်တော့ Post gradute applied Geology တဲ့ နောက် Regional2တဲ့ နောက် Eco နဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်များ သင်္ချာ တွက်စက် ဌာန Computer နောက် ပညာရေးတက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း ( မူလတန်း ) ( အခုလည်းရှိ ) နောက် တော့ MICT Park တဲ့ …. အင်းအခုတော့ ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက် စီးပွားရေး သမားတွေက မျက်စေ့ကျ မီးခိုးမထွက်တဲ့ စက်ရုံတွေ တဲ့ …………… လွမ်းလိုက်ပါဥိး တက္ကသီလာ။
ကျနော်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတော့ ကျေုာင်းမတက်ဘူးဘူး။
ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရတိုင်းရန်ကုန်ကိုအကြောင်းပြပြီးဆင်းသွားတာ။
အဲတော့ ဒီပုံတွေမြင်ရတော့ ကျောင်းသားဘ၀ မှာရန်ကုန်ရောက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ခဲ့ရတာကို
ချောကြီးနှိပ်စက် လို့ အဘ မနေ့ကတည်းက ဂီတာ တစ်ကိုင်ကိုင် နဲ့ဖြစ်နေတာ….
မွန်းအောင် ၊ သျှိုင်းအောင် ၊ခင်ဝမ်း ၊အောင်နိုင် ၊ ဖိုးချို ၊ စိုးလွင်လွင်၊ ပီထီး၊ ပီဆိုင်မောဝ် တို့လဲ မူးကုန်ပီ…
ကြည့်လဲမကြည့်ရဲ မြင်လဲမြင်ချင်နဲ့ နှင်းဆီဆောင် ပုံတွေ့ရတော့ ခု ပိုဆိုးသွားပြီ ကွယ်…..
” တစ်ခါက တစ်ရွာသားရဲ့ ပျက်ခဲ့တဲ့ ကတိ အတွက် 121 ရေခွင့်လွတ် ပါ “…….
မင်းစိတ်ကို မင်းထိန်းပါအုန်း ရှောင်ပါအုန်း ဆောင်ပါအုန်း
ရန်ကုန် က မဟုတ်လို့ 
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ထဲကို မရောက်ဖူးပါဘူး
သို့ သော် ကိုဘလက် ရဲ့ ပုံတွေကြောင့်
ကိုဘလက်တို့ ရဲ့ ကျောင်းသားဘဝ ကို
ခန့် မှန်းမိပြီး ပျော်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်သွားပါတယ်
အသက်မကြီးမငယ်နဲ့ တီချာကြီးခမျာ ဂန္ဓမာဆောင်ပုံကိုကြည့် ပြီး မေ့မျက်ရည်ဝိုင်းတော့ မလိုလို။
ကျေးဇူးပါလူကလေးရေ။ RC ပုံကလည်း အရင် အတိုင်းလိုလို ။
အိမ်း….. ငိုချင်ရက် မောင်ချော လက်တို့ နေပါသကော ကွယ်တို့ရေ။
(တိုးတိုးလေး အတင်းပြောခြင်း။ ။ အုပ်ချုပ်သူ ဆရာ ခိုင်က လေးလေးနက်နက် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦး စသဖြင့် လူကြီးစကားပြောနေတာ ငါတို့တွေ ကလွမ်းတာဘာညာနဲ့ သူငယ်ပြန်နေသလိုပဲ)
ကိုသစ်မင်း ကိုကြည့်ရတာ အီကိုက နဲ့ပဲတူတယ်။
မောင်နှမဆောင်တွေကို အတွဲလိုက် ပြောနိုင်နေတော့ လေ။
အဘလို့တော့ မခေါ်ပါရစေနဲ့ ဆရာဆွေရာ။
ကျွန်တော်တို့ အသက်တွေ သိတ်မကွာလှဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
၁၂၁ ကိုယ်စား ကျွန်တော်ကပဲ ကိုယ်စားခွင့်လွှတ်ပေးပါတယ် ဗျာ။
တီချယ်ကြီးရေ သူငယ်ပြန်တာတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။
ဒါက ကျွန်တော်တို့ ဘ၀ရဲ့ အမြတ်နိုးဆုံး အချိန်တွေဆိုတော့ ဘယ်မေ့နိုင်ပါ့မလဲဗျာ။
ကိုပေ ရေ။ ကျေးဇူးပါဗျာ။
မလျှိုပါဘူးဗျာ။ သိသာတဲ့ ကျနော့ပို့စ်နဲ့ ကော်မန့်တွေကိုကြည့်ပြီး ကိုကြောင်တောင်ပြောပြီးနေပါပြီ။
ကိုဘလက်ချော သတိမထားလိုက်မိလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဘလက်ချောကိုကျေးဇူး
တင်ကြောင်းထပ်ပြောပါရစေ။ ဖေ့စ်ဘွတ် အဲဒရက်စ် ပီအမ် ထားလိုက်ပါတယ်။ အဒ်ပါခင်ဗျာ။
အဲသည်ထဲက ဓါတ်ပုံတွေ သိန်းချီ တန်တော့မယ်ဗျို့ MRTV –4သတင်းထဲမှာ တစ်နေ့က ရန်ကုန်မှာတဲ့ ပြည်ပခရီးသည်တွေ တိုးတက် များပြားနေလို့ ဟိုတယ်အခန်း အရေအတွက် မလုံလောက် နိုင်တော့ဘူးတဲ့ ဒါကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ ရှိ ရုံးဌာန အဆောက်အအုံအချို့ အပါအ၀င် ရန်ကုန် မြို့ သမိုင်း ( ယခု လှိုင် တက္ကသိုလ် ၀င်းက ) RC2 ဖြစ်ခဲ့တဲ့ RIT အဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဆောက်အအုံ ( အဆောင်တွေ ) ကို ဟိုတယ်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့ အထဲပါတယ်တဲ့ ဗျား။
ငယ်ငယ်က ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ဆင်၊မျောက်၊ခါ သုံးဦးသား ဘယ်သူကြီးတယ်ငယ်တယ်ဆိုတာကို သစ်ပင်တပင်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြတာလေး သတိရမိတယ်။
အစောင့်ခေါ်မရလို့ ညတစ်နာရီခွဲလောက်မှာ သထုံဆောင်ဆင်ဝင်ပေါ်ကို ဘယ်ဘက်တိုင်လုံးကတဆင့် ဖက်တက်တုံးက အဲဒီဆင်ဝင်ရှေ့မှာ ဘာအပင်မှတောင် မရှိသေးဘူး။
ကျေးဇူးပဲ blackchaw ရေ…………….
RC2 က လင်မျှော်ကုန်းလေးကော မရိုက်ခဲ့ဘူးလား။ လက်တွေ့သွားလုပ်ရတဲ့ ရာဘာတောလေးရော။ မှတ်မှတ်ရရ ကင်တန်းနားက အပင်ကြီးကော နာဂစ်တုန်းက ပါသွားလား မသိဘူးနော်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ အရိပ်ကို နင်းခွင့် မရခဲ့တော့ ဘာကို လွမ်းရမယ်မှန်းကို မသိပါဘူး blackchaw ရေ …
ဓာတ်ပုံတွေ share ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကိုတော် ကိုပေါက်တို့လည်း မန္တလေး တက္ကသိုလ်ကို အလွမ်းပြေ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပေးရင်ကောင်းမယ်….။ ရာဇတ်ခန်းမ (စာကြည့်တိုက်)တို့ ချစ်သူလမ်းကြားတို့ … ရေနီမြောင်းတို့ပေါ့…။ ရေနီမြောင်းကော အဆိုတော် နွဲ့ယဉ်ဝင်းရဲ့ သီချင်းတွေ ရသေးရဲ့လားမသိဘူးနော်…။ ကိုပေါက်ရေ….. လုပ်ပါဦးဗျို့ မန္တလေး တက္ကသိုလ်ပုံလေးတွေ တောင်းဆိုပါရစေ……….။
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်လေးထဲက RC 2ထဲမှာ ကျောင်းတက်ချင်ခဲ့တာ ဒါပေမယ့် 10တန်းေ အာင်တော့ မတက်ခဲ့ရပါ။ပုံလေးတွေကြည့်ရတာ အလွမ်းပြေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။